တခါတုနျးက ဘီလုံးငှကျတကောငျဟာ တောစပျတခုရဲ့ သဈပငျတပငျမှာ နထေိုငျပါတယျ။ ဘီလုံးငှကျဟာ နစေ့ဉျနတေို့ငျး အပငျခွရေငျးကို ဆငျးပွီး တီကောငျ၊ ပိုးကောငျ စတာတှကေို ရှာဖှေ စားသောကျတယျ။ တီကောငျတှဟော ဘီလုံးငှကျအတှကျ အဓိက စားနပျရိက်ခာတှပေဲ ဖွဈတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး ဘီလုံးငှကျကျဟာ သူ့ရဲ့ နစေ့ဉျလုပျနကြေ အစာရှာ ဖှခွေငျးအလုပျကို ပုံမှနျမလုပျခငျြပဲ ပငျြးရိနပေါတယျ။ တီကောငျတှဟော ရှာဖှစေရာမလိုပဲ အလိုလြောကျ ငါ့ရှေ့ ရောကျလာရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ လို့ ဘီလုံးငှကျဟာ တကိုယျတညျး ပွောဆိုခဲ့တယျ။
တနတေ့ော့ ဘီလုံးငှကျဟာ အစာရှာဖှေ စားသောကျပွီးလို့ သဈပငျထပျမှာ နားနခေဲ့တယျ။ အဲ့ဒီလို ဘီလုံးငှကျ နားနခေိုကျမှာ လူတယောကျဟာ ရပေုံးတပုံးကို ဆှဲလို့ ဘီလုံးငှကျနားနတေဲ့ သဈပငျနားက ဖွတျသှားပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ရပေုံးဆှဲပွီး ဖွတျသှားတဲ့ လူကို မွငျတဲ့အခါ ဘီလုံးငှကျက ဒီလိုပွောတယျ။ "ဗြိူ့မိတျဆှကွေီး ရပေုံးကွီး ဆှဲလို့ ဘယျသှားမလို့ တုနျးဗြ"
အဲ့ဒီလို ဘီလုံးငှကျရဲ့ နှုတျခှနျးဆကျစကားကို ကွားတဲ့ လူက "အို ဘီလုံးငှကျလေး ပါလား၊ ငါ့ရပေုံးထဲမှာ တီကောငျတှေ ပါတယျလေ။ မွို့ကဈေးထဲမှာ တီကောငျနဲ့ ငှကျမှေးနဲ့ လဲလှယျပွီး၊ ငှကျမှေးကို အဝတျအထညျ၊ ခေါငျးအုံး ကွကျမှေးတှေ လုပျတဲ့နရောမှာ သုံးဖို့ မွို့ကို သှားမလို့ပါ"
ဒီတော့ ဘီလုံးငှကျက "ဟာ ဒါဆိုအတျောပဲ၊ ခငျဗြားက ငှကျမှေးလိုခငျြတယျ ကြူပျက တီကောငျ လိုခငျြတယျ ဒါအဆငျပွတောပဲ။ ခငျဗြား မွို့ထဲ မသှားနဲ့တော့ ကြူပျကို တီကောငျတှပေေး ကနြျောက ခငျဗြားကို အမှေးတှေ နှုတျပေးလိုကျမယျ"
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီလူနဲ့ ဘီလုံးငှကျဟာ အပွနျအလှနျ သဘောတူညီမှု ရကွပွီး တီကောငျပုံးကို ဘီလုံးငှကျက ရခဲ့ပါတယျ။ ဘီလုံးငှကျကလညျး သူ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ပေါကျနတေဲ့ အမှေး တျောတျောမြားမြားကို နှုတျပွီး လူကို ပေးလိုကျပါတယျ။ နောငျလညျး ငှကျမှေးလိုခငျြရငျ လာခဲ့နျောလို့ ဘီလုံးငှကျက မှာကွားလိုကျသေးတယျ။
ဒီလိုနဲ့ နောကျနတှေ့မှောလညျး အဲ့ဒီလူဟာ ဘီလုံးငှကျဆီ ရောကျလာပွီး တီကောငျနဲ့ ငှကျမှေး အလဲအလှယျ လုပျခဲ့ပွနျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ နအေ့တျောမြားမြား ကုနျဆုံးလာနဲ့အခါ ဘီလုံးငှကျမှာ အမှေးအတောငျရယျလို့ တစုံတရာမှ မကနျြတဲ့ အဖွဈကို ရောကျလာပါတော့တယျ။
လူရောကျလာတဲ့ အခါ "ခငျဗြားက အမှေးမှ မရှိတော့တာ၊ ဒီတော့ ကြူပျလညျး တီကောငျ မပေးနိုငျဘူး" ဆိုပွီး ထှကျခှာသှား ပွနျတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ဘီလုံးငှကျဟာ အမှေးအတောငျ မရှိတဲ့အတှကျ ပြံသနျးခွငျး၊ အစာရှာဖှခွေငျး တှကေို မပွုလုပျနိုငျတော့ဘဲ ငတျမှတျလာပါတော့တယျ။ တဖွညျးဖွညျး အားနညျး လာခဲ့တဲ့ နောကျမှာတာ့ ဘီလုံးငှကျဟာ အပငျအောကျကို ပွုတျကပြွီး သပှေဲ ဝငျခဲ့ရတော့တယျ။
တကယျတော့ ကြှနျုပျတို့တှေ ဟာလညျး ဘီလုံးငှကျရဲ့ နစေ့ဉျ အစာရှာဖှခွေငျးနဲ့ တူတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျ လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ငွီးငှနေ့ေ တတျကွပါတယျ။ ဘဝရဲ့ ပငျပနျးခွငျးမှာ လုံးခြာလညျ လိုကျလာပွီး ဘီလုံးငှကျလို အားစိုကျခွငျး တစုံတရာ မပါဝငျတဲ့ ပှပေါကျတှေ အခြောငျကှကျတှကေို စောငျ့မြှျောနတေတျ ကွပါတယျ။
အလှယျလမျး လိုကျခဲ့တဲ့ ဘီလုံးငှကျကလေး အသကျဆုံးရှုံးသလို ငှကွေေးစီးပှားရေး အလှယျလမျးဖွဈတဲ့ လောငျးကစားလမျး လိုကျမိရငျလညျး တခြိနျမှာ စီးပှားပကျြနိုငျပါတယျ။
Success is not easy and it is certainly not for the lazy. အောငျမွငျခွငျးဟာ မလှယျကူပါဘူး၊ ပငျြးရိသူတှေ အတှကျလညျး အောငျမွငျမှု ဖွဈမလာပါဘူး။ တကယျတော့ ဘဝရဲ့ ငှကွေေး ဥစ်စာပွညျ့စုံခွငျးဟာ တစုံတရာသော အားစိုကျထုတျမှု မရှိပဲ အလိုအလြောကျ ဖွဈမလာဘူးလို့ ဆိုလိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
တခါတုန်းက ဘီလုံးငှက်တကောင်ဟာ တောစပ်တခုရဲ့ သစ်ပင်တပင်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ဘီလုံးငှက်ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပင်ခြေရင်းကို ဆင်းပြီး တီကောင်၊ ပိုးကောင် စတာတွေကို ရှာဖွေ စားသောက်တယ်။ တီကောင်တွေဟာ ဘီလုံးငှက်အတွက် အဓိက စားနပ်ရိက္ခာတွေပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဘီလုံးငှက်က်ဟာ သူ့ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အစာရှာ ဖွေခြင်းအလုပ်ကို ပုံမှန်မလုပ်ချင်ပဲ ပျင်းရိနေပါတယ်။ တီကောင်တွေဟာ ရှာဖွေစရာမလိုပဲ အလိုလျောက် ငါ့ရှေ့ ရောက်လာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့ ဘီလုံးငှက်ဟာ တကိုယ်တည်း ပြောဆိုခဲ့တယ်။
တနေ့တော့ ဘီလုံးငှက်ဟာ အစာရှာဖွေ စားသောက်ပြီးလို့ သစ်ပင်ထပ်မှာ နားနေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလို ဘီလုံးငှက် နားနေခိုက်မှာ လူတယောက်ဟာ ရေပုံးတပုံးကို ဆွဲလို့ ဘီလုံးငှက်နားနေတဲ့ သစ်ပင်နားက ဖြတ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ရေပုံးဆွဲပြီး ဖြတ်သွားတဲ့ လူကို မြင်တဲ့အခါ ဘီလုံးငှက်က ဒီလိုပြောတယ်။ "ဗျိူ့မိတ်ဆွေကြီး ရေပုံးကြီး ဆွဲလို့ ဘယ်သွားမလို့ တုန်းဗျ"
အဲ့ဒီလို ဘီလုံးငှက်ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို ကြားတဲ့ လူက "အို ဘီလုံးငှက်လေး ပါလား၊ ငါ့ရေပုံးထဲမှာ တီကောင်တွေ ပါတယ်လေ။ မြို့ကဈေးထဲမှာ တီကောင်နဲ့ ငှက်မွေးနဲ့ လဲလှယ်ပြီး၊ ငှက်မွှေးကို အဝတ်အထည်၊ ခေါင်းအုံး ကြက်မွှေးတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးဖို့ မြို့ကို သွားမလို့ပါ"
ဒီတော့ ဘီလုံးငှက်က "ဟာ ဒါဆိုအတော်ပဲ၊ ခင်ဗျားက ငှက်မွှေးလိုချင်တယ် ကျူပ်က တီကောင် လိုချင်တယ် ဒါအဆင်ပြေတာပဲ။ ခင်ဗျား မြို့ထဲ မသွားနဲ့တော့ ကျူပ်ကို တီကောင်တွေပေး ကျနော်က ခင်ဗျားကို အမွှေးတွေ နှုတ်ပေးလိုက်မယ်"
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီလူနဲ့ ဘီလုံးငှက်ဟာ အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှု ရကြပြီး တီကောင်ပုံးကို ဘီလုံးငှက်က ရခဲ့ပါတယ်။ ဘီလုံးငှက်ကလည်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ အမွှေး တော်တော်များများကို နှုတ်ပြီး လူကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောင်လည်း ငှက်မွေးလိုချင်ရင် လာခဲ့နော်လို့ ဘီလုံးငှက်က မှာကြားလိုက်သေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့တွေမှာလည်း အဲ့ဒီလူဟာ ဘီလုံးငှက်ဆီ ရောက်လာပြီး တီကောင်နဲ့ ငှက်မွှေး အလဲအလှယ် လုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ နေ့အတော်များများ ကုန်ဆုံးလာနဲ့အခါ ဘီလုံးငှက်မှာ အမွှေးအတောင်ရယ်လို့ တစုံတရာမှ မကျန်တဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်လာပါတော့တယ်။
လူရောက်လာတဲ့ အခါ "ခင်ဗျားက အမွှေးမှ မရှိတော့တာ၊ ဒီတော့ ကျူပ်လည်း တီကောင် မပေးနိုင်ဘူး" ဆိုပြီး ထွက်ခွာသွား ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘီလုံးငှက်ဟာ အမွေးအတောင် မရှိတဲ့အတွက် ပျံသန်းခြင်း၊ အစာရှာဖွေခြင်း တွေကို မပြုလုပ်နိုင်တော့ဘဲ ငတ်မွတ်လာပါတော့တယ်။ တဖြည်းဖြည်း အားနည်း လာခဲ့တဲ့ နောက်မှာတာ့ ဘီလုံးငှက်ဟာ အပင်အောက်ကို ပြုတ်ကျပြီး သေပွဲ ဝင်ခဲ့ရတော့တယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့တွေ ဟာလည်း ဘီလုံးငှက်ရဲ့ နေ့စဉ် အစာရှာဖွေခြင်းနဲ့ တူတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ငြီးငွေ့နေ တတ်ကြပါတယ်။ ဘဝရဲ့ ပင်ပန်းခြင်းမှာ လုံးချာလည် လိုက်လာပြီး ဘီလုံးငှက်လို အားစိုက်ခြင်း တစုံတရာ မပါဝင်တဲ့ ပွပေါက်တွေ အချောင်ကွက်တွေကို စောင့်မျှော်နေတတ် ကြပါတယ်။
အလွယ်လမ်း လိုက်ခဲ့တဲ့ ဘီလုံးငှက်ကလေး အသက်ဆုံးရှုံးသလို ငွေကြေးစီးပွားရေး အလွယ်လမ်းဖြစ်တဲ့ လောင်းကစားလမ်း လိုက်မိရင်လည်း တချိန်မှာ စီးပွားပျက်နိုင်ပါတယ်။
Success is not easy and it is certainly not for the lazy. အောင်မြင်ခြင်းဟာ မလွယ်ကူပါဘူး၊ ပျင်းရိသူတွေ အတွက်လည်း အောင်မြင်မှု ဖြစ်မလာပါဘူး။ တကယ်တော့ ဘဝရဲ့ ငွေကြေး ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းဟာ တစုံတရာသော အားစိုက်ထုတ်မှု မရှိပဲ အလိုအလျောက် ဖြစ်မလာဘူးလို့ ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။